विप्लवकाे सम्बाेधनकाे पूर्ण पाठ - DURBAR TIMES
HomeOpinionविप्लवकाे सम्बाेधनकाे पूर्ण पाठ
विप्लवकाे सम्बाेधनकाे पूर्ण पाठ
नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच सम्पन्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समाराेहमा उपस्थत वार्ता टाेलीका कमरेडहरू ,यहाँ उपस्थित सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष , सम्माननीय उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू ,माननीय ज्यूहरू ,हाम्राे जनप्रिय पार्टीका केन्द्रीय समितिका सहयाेद्दा कमरेडहरू र याे हस्ताक्षर समाराेहलाइ नजिकबाट स्पर्श गर्नका लागि याे समाराेहमा आफ्नाे उत्साहपूर्ण सहमति दिनका लागि उपस्थित पत्रकार बन्धुहरू सुरक्षा निकायलगायत याे हल र बाहिर उपस्थित सबै मित्र र जनसमुदाय सबैमा म हाम्राे पार्टीकाे तर्फबाट न्यानाे लालसलाम गर्न चाहन्छु ।
आदरणीय र यहाँ सहभागी मित्रहरू । याे एउटा नयाँ दिन नेपाली राजनीतिकाे , नेपाली राजनीतिक आन्दाेलनकाे याे एउटा नयाँ दिन । जाे हाम्राे अगाडी उपस्थित छ । यसलाइ सफल पार्नकाे निम्ति। याे तीनबुँदे सहमतिपत्र सफलतापूर्वक तयार पार्न र सहमति कायम गर्न सफल वार्ता टाेलीका मित्रहरू र कमरेडहरूलाइ म हार्दिक बधाइ र धन्यवाद दिन चाहन्छु । सँगसँगै याे पहल गर्ने हाम्राे पार्टी नेपाल सरकार यसका जिम्मेवार नेतृत्वगण र यसलाइ सफलतातर्फ अग्रसर गराउनका लागि विभिन्न् क्षेत्रबाट भूमिका पूरा गर्ने कानूनविद , मानव अधिकारवादी , पत्रकार बन्धुहरू , साहित्यकार , बुद्दिजिबीहरू , कलाकारहरू , सुरक्षा निकायका सेना , प्रहरीका मित्रहरू , विभिन्न क्षेत्रमा भूमिका पूरा गर्ने हाम्रा अन्य कम्युनिष्ट पार्टी हाम्रा मित्रहरू , कमरेडहरू ,विभिन्न तरीकाले हामीसँग आबद्द भएर हामीलाइ सुझाव दिने मित्रहरू सबैलाइ म याे अवसरमा सम्मान गर्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु । किनकी याे सहमति केबल नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकाे मात्र कुरा हाेइन । याे सहमति केबल पार्टीकाे कुरामात्र हाेइन र केही नेताहरूकाे कुरा हाेइन । याे सहमतिकाे पछाडि हाम्राे त्याे भित्र लुकेकेा एउटा महान आकांक्षा छ ।
नेपाल देशलाइ एउटा आत्मनिर्भर स्वाधीन र सुन्दर देश बनाउने हाम्राे सपना याे भित्र छ । याे भित्र देशमा एउटा समृद्ध जीवनकाे चाहना याे भित्र रहेकाे छ । त्यसैले यसलाइ पूरा गर्नका लागि , जसरी हामीले सम्पूर्ण क्षेत्रबाट एउटा सकारात्मक सहयाेग प्राप्त गर्याैँ हामी खुशी छाैँ र हामी धन्यवाद दिन चाहन्छाैँ ।
आदरणीय मित्रहरू । कि आज एउटा अर्काे सन्दर्भकाे दिन पनि छ । अघि हाम्राे उद्घाेषक कमरेडले , राजन भट्टराइ कमरेडले स्मरण पनि गर्नुभयाे । एउटा अँध्याराे समयमा , अँध्याराे एउटा परिवेशमा उज्यालाे एउटा सपना देखेर झापाकाे सुखानीकाे जंगलमा हाम्रा ५ जना अग्रजहरूले रगत दिएका थिए । उनीहरूले सहर्ष आफ्नाे जीवनलाइ नेपाली जनता र नेपाल देशकाे लागि समर्पित गरेका थिए । त्याे दिनसँग संयाेग भनाैँ आज जाेडिएकाे छ । त्यसकारण आजकाे दिनमा जाे शहीदहरूले एउटा निश्चल सपना बाेक्दै , एउटा उत्कृष्ट आकांक्षा राख्दै नयाँ भविष्यकाे निम्ति , नेपाली जनताकाे एउटा सुखद भविष्यकाे निम्ति आफ्नाे जीवन दिनुभएकाे थियाे । त्याेसँग जाेडिएकाे याे दिन , जसलाइ हामीले शहीद सप्ताह भनेर मनाउने गरेका छाैँ । जनयुद्धमा बलिदान गर्ने दिलबहादुर रम्तेल फागुन १४ बाट झापाकाे जंगलमा झुण्डिन तयार र गाेली खान तयार ५ जना अग्रजहरूकाे सहित जाेडेर नेपालका शहीदहरूकाे , नेपालका परिवर्तनकारी शहीदहरूकाे स्मरणमा हामीले शहीद सप्ताह मनाउने गरेका छाैँ ।
संयाेग भन्नुपर्छ आज त्यही दिन परेकाे छ । आज बिहानै अवसर पनि जुट्याे र हामी एउटा गाउँमा बस्दै गर्दा हामीलाइ शहीदकी आमाले टीका लगाइदिनुभयाे । र , एउटा उहाँले भन्नुभयाे आजसम्म धेरैका इच्छा पूरा भए तर , शहीदकाे चाहना पूरा भइसकेकाे छैन । नेपालका जनताकाे चाहना पूरा भएकाे छैन । हामी दुःख गरी खाने नेपालीकाे चाहना पूरा भएकाे छैन । त्यसैले तपाइहरू त्यहाँ हस्ताक्षर गर्दा याे सम्झेर गर्नुहाेला । र हामीलाइ त्याे अनभूति भएकाे छ । कमरेडहरू र मित्रहरू , उहाँकाे त्याे कुराहरू सम्झिँदा हामीले भन्नुपर्याे , हामीभित्र त्याे एउटाचाँही भावना उर्लिने गर्छकि हामी जुन उद्देश्य लिएर कम्युनिष्ट आन्दाेलनमा सहभागी बन्याैँ । हाम्रा अग्रजहरू सहभागी बन्नुभयाे । दुःख नपाउने कम्युनिष्ट नेता छैन । मृत्युकाे नजिक नपुगेर फर्केकाे नेतापनि छैन । सबैभन्दा कठीन समय , सबैभन्दा कठीन खालका परिस्थितिहरू नझेलेकाे हामीसँग काेहीपनि नेताहरू छैन । हामी याे परिवेशमा छाैँ । त्यसैले म याे अवसरमा सबै आदरणीय शहीद हरूलाइ सम्मान गराैँ । शहीद परिवारहरूलाइ विश्वास दिलाउँ कि हामी जे सपना देखेर याे कम्युनिष्ट आन्दाेलनमा लाग्याैँ, हाम्राे जीवनकाे बलिदान गर्छाैँ तर शहीदकाे सपना मर्न दिदैनाैँ ।
हाम्राे एउटा त्याे प्रतिबद्दता छ मित्रहरू । त्याे लिएर म तपाइँहरूकाे बीचमा उभिएकाे छु । यहाँहरूकाे बीचमा उभिएकाे छु । बेपत्ता याेद्धाहरूकाे कुरा गर्नुहाेस , घाइतेहरूकाे कुरा गर्नुहाेस, या परिवर्तनकारी आन्दाेलनमा सहभागी भएर अहिलेसम्म घाइते भएर रहनुभएका हाम्रा याेद्धाहरूकाे कुरा गर्नुहाेस । हामीले अहिले सबैलाइ सम्झिनुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ । हामी उनीहरूकाे चाहनालाइ पुरा गर्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । म यति राख्न चाहन्छु । अहिलेपनि हाम्रा कमरेडहरू थुप्रै , डेढसयभन्दा बढी कमरेडहरू जेलमा हुनुहुन्छ । छुट्दै पनि आउनुभएकाे छ । कमरेड कञ्चन यहाँ आइपुग्नुभएकाे छ छुटेर । र म वहाँलाइ यहीँबाट स्वागत पनि गर्न चाहन्छु । र हाम्रा धेरै साथीहरू अब छुट्नुहुनेछ र हामी एउटा मुक्त आकाशमा फेरी मिलन हुनेछाैँ । हाम्राे विश्वास छ । याे वातावरण बनेकाे छ । यसकाे लागि नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हामी दुवैले एउटा जिम्मेवारी पूरा गरेकाे अनुभूति भएकाे छ ।
मित्रहरू समाजमा चारथरी मान्छेेहरू देखिन्छन् । एकथरी शाेषक र उत्पीडक छन् । एकथरी शाेषित छन् र उत्पीडित छन् तर उनीहरू बाेल्न सक्दैनन् । तेश्राेथरी मान्छेहर अलिअलि गुनगुन त गर्छन् गुनासाे त राख्छन् तिनिहरू , उठ्न सक्दैनन् , जाग्न सक्दैनन् । तर, हामी कम्युनिष्ट जतिबेला अन्यायमा परिन्छ , जतिबेला आफ्ना मान्यताहरूमा घात लागेकाे , मान्यताहरूमाथी हमला भएकाे महसुस हुन्छ , आफ्नाे देशमाथी अतिक्रमण भएकाे या कसैले हस्तक्षेप गरेकाे महसुस हुन्छ , अर्का नागरिकहरू छन् जाे उनीहरू विद्राेह गर्छन् । हामी कम्युनिष्टहरू हाम्रा मान्यताहरूमाथी हमला हुँदा , हाम्राे आकांक्षामाथी हमला हुँदा , हाम्राे देशमाथी धावा हुँदा , हाम्राे देशमाथी कसैले अलिकति गिद्देदृष्टि लगाउँदा विद्राेह गर्छाैँ । हामी विद्राेह गर्ने मान्छेहरू हाैँ र विद्राेह गर्दै अहिलेसम्म आएका छाैँ । तर कम्युनिष्टहरू विद्राेहमात्र गर्दैनन् । जब परिस्थिति बदलिन्छ , परिस्थिति बदलिएकाे स्थितिमा र राज्यले आफ्नाे भूमिका पूरा गरेकाे स्थितिमा कम्युनिष्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि हुन् । विद्राेहका याेद्धामात्र हाेइनन् शान्तिका दूत पनि याे संसारमा काेही छ भने कम्युनिष्ट नै छन् । सम्पूर्ण उत्पीडनलाइ मिल्काएर समाजलाइ दीर्घकालीन ढंगले न्यायपूर्ण समाज स्थापित गर्ने विचार दृष्टिकाेण र आकांक्षा कहिँ छ भने त्याे कम्युनिष्ट आन्दाेलनसँग छ । त्याे हामीलाइ विश्वास छ । त्यसैले त्याे आकांक्षासहित हामीले संघर्ष गरेका छाैँ । र आजकाे परिवेश बदिलएपछि हामीले भनेकाे छाैँ तीनबुँदैमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिबद्ध छ। यसलाइ हामी पालना गर्छाैँ । यसलाइ हामी दृढतापूर्वक भन्छाैँ । यहाँ कसैले पनि कहिँबाट पनि आशंका या विभिन्न ढंगले यसलाइ उत्तेजनात्मक , या अर्काे ढंगले कुतर्क गर्न जरूरी छैन ।
हामी प्रतिबद्ध छाैँ । यसलाइ हामी पालना गर्छाैँ । हामीलाइ के लागेकाे छ भने नेपाली समाज रूपान्तरणकाे प्रकृयामा अगाडी बढीरहेकाे छ । लामाे याे प्रकृयामा यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले देखेका छाैँ , सामाजिक रूपान्तरण , राज्यकाे रूपान्तरण र जीवनकाे रूपान्तरण पुगेकाे छैन । त्यसलाइ हामीले कुराकानी गर्थ्याैँ । पहिले पनि । हामी अहिले याे , कर्णालीतिर एउटा गीत गाइन्छ , यहाँ सुन्नुभएकाे हाेला हाेइन , याे कस्ताे प्रेम भयाे जुन र घामकाे जस्ताे कहिल्यै भेट नहुने भनेकाे ज स्ताे । जुन र घामकाे भेट हुँदैन भनेर देउडामा एउटा गीत गाइन्छ । हामी त्यस्तै त्यस्तै हुनथालेकाे जस्ताे मान्छेले अनुमान गर्थे । तर , जुन र घामकाे पनि भेट हुन्छ ।याे अगाडीपनि , याे अगाडीपनि हाम्राे कुरा भएकाे थियाे । हामीले इमान्दारीपूर्वक आफ्नाे कुरा यहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकाे अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा भएकाे थियाे । मैले राखेकाे थिएँ । तपाइँहरूले नेतृत्व गर्नुहाेस । हामी कसैलाइ पिडाएर हैन , कसैकाे भाग खाेसेर हैन , कसैमाथी हमला गरेर हैन , हामी नेपाली जनताकाे श्रममाथी उभिएर आफ्नाे देश बनाउन चाहन्छाैँ । हामी बनाउँछाैँ । त्याे बनाउने नेतृत्व हामीले गराैँ । हाम्राे चाहना हाम्राे छलफल चलेकाे थियाे । आज हामी त्यहाँ एउटा नयाँ परिवेशबाट हामीले भन्याैँ नेपाली समाजकाे रूपान्तरण हुँदै आएकाे छ याे सही कुरा हाे । सातसालदेखि आजसम्म खण्ड खण्ड रूपमा नेपाली समाजकाे रूपान्तरण हुँदै आएकाे छ । तर त्याे पूर्ण भएकाे छैन । आजपनि नेपालका मजदूरहरूकाे स्थान कमजाेर छ । आजपनि किसानहरूकाे स्थिति बेहाल छ । आजपनि दलित , महिला , जनजाती , उत्पीडित, मधेशी अथवा उत्पीडित समुदायहरू सन्तुष्ट छैनन् । हामी त्याे देख्छाैँ। त्याे परिवेशमा हाम्राे भनाइ के छ भने जनताकाे प्रतिनिधी अथवा श्रमजिवी वर्गकाे प्रतिनिधि हुनुकाे हिसाबले जहाँजहाँ हाम्राे असहमति रह्याे त्यहाँ दृढतापूर्वक राख्याैँ । संविधान बन्दाकाे कुरा गर्नुहाेस या नेपालमा व्याख्या गरिएकाे संसदीय व्यवस्थाकाे कुरा गर्नुहाेस या तपाइँकाे चै पुँजीवादी , बहुदलीय व्यवस्थाकाे व्याख्या भयाे त्याेमा हामी सहमत भएनाैँ । हामी अहिलेकाे सरकारसँगकाे कुरा हाेइन याे । हामी हाेल नेपालकाे एउटा राजनीतिक रूपान्तरणकाे प्रकृयामा जे जेमा छलफलकाे विषय भए त्याेमा हामी सहमत हुन सकेनाैँ , भएनाैँ । र हामीले आफ्नाेतर्फबाट एउटा विद्राेह गर्याैँ । हामी अगाडी बढेकै हाे । हाम्राे अहिले पनि भनाइ छ ,नेपालमा आजपनि कसैले सुरक्षित अनुभूति गर्न सकेकाे छैन । सबै नेताहरूलाइ , सबै पार्टीहरूलाइ सबे जनतालाइ आफ्नाे जीवनमाथी आँफै हाबी भएकाे , आफ्नाे जीवनमाथी तपाइँ आफै नेतृत्व गरिरहेकेा अनुभूति भएकेा छैन । हरेक तपाइँ अहिलेकाे भन्नुहाेस या जहिलेकाे पनि । हरेक घटनाक्रममा एउटा ठूलाे तरंग नेपाली जनताकेा बीचमा छ । अहिले पनि छ । शायद तपाइँहर सबैले बुझिसक्नुभएकाे छ । हामी त एकदम झुपडाभित्र बसेर आयाैँ । झुपडीमा पनि त्याे छ । महलमा पनि छ । शहरमा पनि छ गाउँमा पनि छ । मेराे विचारमा अनतराष्ट्रमा पनि छ । नेपालकाे युवा जहाँ जहाँ बेचिएकाे छ , या जहाँ जहाँ फालिएकाे छ , सडकमा पुगेकाे छ या मजदुरकाे रूपमा परिणत भएकाे छ । त्यहाँपनि नेपालीकाे अनुभूति छ । एकचाेटी फेरी देश फर्किएपछि फर्किनु नपराेस भन्ने चाहना हामी त्यहाँ भेट्छाैँ । यसकाे अर्थ हामी के पाउँछाैँ भने एकचाेटी जसरी हामी प्रयाेग गर्दै आइरहेका छाैँ याे ठीकै हाेला तर नयाँ प्रयाेग गर्न आवश्यक छ । हामीले भनेका छाैँ जनमत , छलफल हुने पनि गरेकाे छ । जनमत , सार्वभाेमसत्ता सम्पन्न जनता , जनतालाइ एकचाेटी नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउन जरूरी छ । के चाहन्छन् जनताले ? के तपाइँहरूकाे याे दलाल पुँजीवादी चक्रमा सँधै घुमिरहनुपर्ने हाम्राे नियति हाे ? के नेपाली जनताले कहिलेपनि स्वतन्त्रतापूर्वक स्टेप चाल्न नपाउने ? कहिलेकाँही राज्यले , सरकारले चाल्न खाेज्दापनि नहुने परिस्थित त बन्याे नि त । याे त हामीले छ्याङ्गै देखेका छाैँ नि । हैन ? जनताले त साेच्ने कुरै छैन , साेच्न पाउने ठाउँ नै छैन । कसैले पनि नेपाललाइ आत्मत्व ठानेर निर्णय गर्छु भन्दाखेरी नपाउने परिवेश नेपालमा बनेकाे छ । याे परिवेशलाइ अन्त्य गर्न नेपाली जनतालाइ एकचाेटी त्याे अधिकार प्रयाेग गर्न दिनुपर्छ , हाम्राे अहिले पनि त्याे दृष्टिकाेण छ । नेपाली जनताले त्याे पाउनुपर्छ । नेता दल सबैलाइ हामीले चुन्याैँ । आवश्यक पर्दाखेरी प्रत्यक्ष ढंगले भविष्यकाे बारेमा जनमत दिने , फैसला दिने अधिकार जनताले पाउनुपर्छ । हामी यहाँबाट आग्रह गर्न एकदम हार्दिकतापूर्वक , हृदयदेखि हामी सबैलाइ आग्रह गर्न चाहन्छाैँ , हामी तयार छाैँ । कम्युनिष्टहरू , मान्छे भन्छन् युद्ध , युद्ध काे अन्त्य कसैले गर्छ भने याे विश्वमा कम्युनिष्टले मात्र गर्छ । कम्युनिष्ट जुन दिन विजयी हुनेछ संसारमा सम्पूर्ण हतियार युद्धकाे अन्त्य हुनेछ विश्वमा । हाम्राे त्याे विश्वास छ । किनकि उत्पीडन र उत्पीडकहरूकाे अवस्था अन्त्य हुने बेला युद्धमा कुनैपनि स्थान रहनेछैन । त्यसकाे लागि हाम्राे विश्वास केछ आदरणीय र यहाँ उपस्थित मित्रहरू कमरेडहरू, कि हामीले एकचाेटी नेपाली जनतामा त्याे हिम्मत गर्नैपर्छ । यसाे भनेर हामी उत्ताउलाे तरिकाले जाउँ , यसाे हाेइन । एकचाेटी गम्भीरतापूर्वक याे छलफल गर्नै पर्छ । घुम्दै घुम्दै रूम्जाटार पुर्याउने र रूम्जाटार पुर्उाएर घाेडामा चढाउने याे खालकाे परिस्थिति नेपाली राजनीतिमा देखिन खाेज्याे यसलाइ हामीले बदल्न , एउटा अग्रगामी , अग्रजहरूलाइ भन्छु , हामी सबैले साेच्ने अहिले यै र त्यै याे पनि हाेइन भन्ने मानशिकताबाट हामी खुल्ला हुनुपर्छ । हामी हातेमालाे गरेर सहकार्य गर्न , अगाडी बढ्न तयार छाैँ । हामी यहाँपनि भन्छाैँ यदी हामीलाइ कसैले हस्तक्षेप गर्याे भने कसैले नजर देखायाे भने हाम्राे शरीर याे भूमीमा गाडिनेछ तर हामी झुक्ने छैनाैँ । हाम्राे याे प्रतिबद्धता छ । त्यसैले आदरणीय कमरेडहरू , मित्रहरू, मान्यजनहरू र यहाँ सहभागी मित्रहरू सबैलाइ म एकपटक फेरी विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु । जुन अवसर आज हामीलाइ प्राप्त भएकाे छ ,यसलाइ हामी सार्थक पाराैँ । नेपाली जनताकाे हितमा नेपाल राष्ट्रकाे हितमा , उहाँहरूकाे एउटा स्वर्णीम भविष्यकाे निम्ति सफल पाराैँ ।अवश्य पनि हामी सफल हुनेछाैँ । हाम्राे पार्टीकाे तर्फबाट त्यसलाइ पालना गर्ने कुरा म यहाँ नेपाल सरकारलाइ वार्ता टाेलीलाइ हाम्रा अग्रजहरूलाइ सबै मित्रहरूलाइ सबै सबैलाइ आश्वस्त पार्दै आफ्नाे कुरा टुङ्याउन चाहन्छु । हवस्त धन्यवाद । लालसलाम
Previous articleपिके घाइते, पीएसजीविरुद्धको खेल गुमाउन सक्ने
Next articleविप्लव र नेपाल सरकारबीच छुटेकाे चाैथाे बुँदा